I-Quaint 2 bedroom ifulethi eliphezulu e-duplex. - I-Airbnb
I-Quaint 2 bedroom ifulethi eliphezulu e-duplex.
Leli khaya lisendaweni ephephile, eduze nomgwaqo omkhulu. Eduze ne-UWO, ukuthenga, indawo yokudlela, namabhulokhi ambalwa amafushane ukusuka epaki, ukudoba kanye nokuhamba ngezikebhe.
Unegumbi lokulala eli-2, indlu yokugezela engu-1 ephezulu ongayisebenzisa.
Imibhede yosayizi weNdlovukazi emakamelweni okulala, i-futon egumbini lokuphumula. I-Queen size air bed nayo iyatholakala. Ukusetshenziswa okugcwele kwekhishi nendawo yokupaka izimoto ezi-2, i-inthanethi yamahhala, indawo engemuva engemuva, ukusetshenziswa kwe-grill kanye nomgodi womlilo. Umnikazi uhlala esitezi esingezansi. Izilwane ezifuywayo zingavunyelwa. Izingane zamukelekile njalo.
.Unefulethi lonke eliphezulu uwedwa. Unomnyango oyimfihlo wesivakashi. Umnikazi usendaweni. Futhi singabeka umatilasi womoya ekamelweni elikhulu kunawo wonke angu-2.
4.84 · 137 okushiwo abanye
Indawo enokuthula, omakhelwane abanobungane futhi eseduze nayo yonke into. Igceke elikhulu elinetafula nezihlalo ozozisebenzisa.
Umnikazi esizeni futhi uyatholakala nganoma imiphi imibuzo noma izinkinga. Sikujabulele ukuba nezivakashi zethu zangaphambilini futhi sijabulela ukufunda ngendlela ehlukile izivakashi zethu eziphila ngayo impilo yazo yansuku zonke.